यो आवाज अचम्मको बन्ला तर यस्तो लाग्छ– पर्यटकीय सुविधामा अपाङ्गमैत्री सोच निर्माण हुनुपर्छ । महिला बालबालिकामैत्री सुविधा होऊन् । वृद्धवृद्धाले मजाले आनन्द लिऊन् । सुविधा धेरै दिएर पनि खुसी पस्कँदा व्यापार घाटा हुन्छ भने हामी भन्न सक्छौँ मानिस त सस्तो व्यापारको होलसेलमै त झुम्मिन्छ । यदि त्यसो हो भने पर्यटकीय स्थलमा चर्को महँगीकै फेसन किन चलाइरहनुप¥यो ? सर्वहारा वर्गको नेतृत्व त्यहाँ हुन सक्दैन भने के पर्यटकीय स्थल हुनेखाने या त पैसावालकै लागि मात्र हो त ?
सायद यो सवाल सबैमा पाच्य नबन्ला तर आजको मागसँग सम्बन्धित हो भन्दा फरक नपर्ला । यद्यपि स्पष्ट भावना हो– हरेक होटलवाला, गाडीवाला स्वदेशी पर्यटकसँग भन्दा विदेशीसँगै पैसाको ठूलो मुठो हेरेर आकर्षित बन्छ । तर उसले बुझ्नुपर्ने महŒवपूर्ण विषय हो– स्वदेशी पर्यटकले त्यो सुविधाको राम्रो प्रचार गर्छ । खानपान, भ्रमण सुविधा, सेवा र दामको तादात्म्यतासँग नेपाली मौलिकता जागोस् । साहित्य, सङ्गीत, भाषा, राष्ट्रियता र सस्कृति झल्किऊन् । दुःखको कुरा विदेशी पर्यटकलाई हामी नेपालीले भिखारीको जस्तो भान पारिरहेका हुन्छौँ । जबर्जस्ती आफ्नो सामान भिराउन खेदिरहेका दृश्य, पैसा माग्दै हात थापेका दृश्य कति लज्जास्पद लाग्छन् । यी विषय झिना मसिना हुन् तर मनोविज्ञानको कोणमा घातक अवश्य हुन् ।
नाराका टेबल गफभन्दा व्यावहारिक वास्तविकतासँग नातो गाँस्नुपर्ने आवश्यकतामा सरोकारको ध्यान जानुपर्ने हो । बरु यसका लागि त आधुनिक ढङ्गका डकुमेन्ट्रीको खाँचो महसुस हुन्छ । मूलतः लुम्बिनी, पोखरा, इलाम, मुस्ताङ, कर्णाली क्षेत्र, कैलाली क्षेत्र, मध्यमाञ्चल क्षेत्रजस्ता स्थानका नाम आइरहे पनि लुकेका स्थानको खोज, अन्वेषण र सम्भावनालाई खोतल्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारी कुप्रवृत्ति र कतिपय पर्यटकीय स्थलका सिन्डिकेटको मारमा आजका पर्यटकका पीडा र अप्ठ्यारा छन् । प्रशासकीय भागबन्डाले गैरजिम्मेवार नेतृत्वको असरले झापड हानेको अनुभूत हुन्छ । व्यक्तिगत स्वभाव र प्रवृत्तिले पनि मनोवैज्ञानिक अप्ठ्यारा सिर्जना भइरहेका तीता विडम्बना छन् । नीति, कानुन र बजेट व्यवस्थापनका कुरामा भन्दा बढी जनतालाई प्रोत्साहन, सम्भाव्यता प्रदर्शन र अवसरका बाटा खुला गर्ने रणनीति तयार पारे पर्यटन विकास र साथमा कृषि र रोजगार विकासको दोहोरो फाइदा हुने कुरालाई मनन गर्न सकिएला । हुनलाई संविधानतः स्पष्टोक्ति छन्, टुरिजम भिजन २०२० का आन्तरिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटन विकासका योजना या त बजेट तर्जुमाका विषयले विश्व बजारलाई जेजसरी छाप पार्लान् तर यससँग सम्बन्धित मनोविज्ञान र बाध्यतामा देशको अवस्थाले प्रभाव पार्दो रहेछ । सुविधा र सोचमा लहसिएको सामाजिक मनोविज्ञानले झापड हान्दो रहेछ । यसर्थ रिसोर्ट, मनोरञ्जनका आकर्षक केन्द्रसँग आर्थिक अपेक्षा र बजारीकरणको उचित संयोजनको खाँचो महसुस हुन्छ । निजी क्षेत्रमा सहकार्य र लाभांश वितरणसँग अब त स्थानीय सरकारको सहसम्बन्ध गाँसिएला नै । आधुनिक पर्यटकीय व्यवस्थापनका लागि अब सर्वहारा वर्गको समावेशी नूतनता चाहिन्छ । माग र पूर्तिको नियम तथा मूल्य घटे माग बढ्ने अर्थशास्त्रीय सहसम्बन्धको मनोविज्ञानसँग पर्यटन मनोविज्ञानले झटारो हानेको भान हुन्छ ।राताेपाटीकाे सहयाेगमा